तानसेनको सडक फराक्नुस् मेयरसाब, तपाईंमाथी ढुङ्गा बर्सिए हामी छाती थाप्न तयार छौं | Boli Dainik
Home बोली विचार
तानसेनको सडक फराक्नुस् मेयरसाब, तपाईंमाथी ढुङ्गा बर्सिए हामी छाती थाप्न तयार छौं
तनाबै तनाबको बिचमा यसो मन बहलाउन युट्युव खोल्दै थिएँ, पत्रकार मित्र मुक्ति न्यौपानेले सेरोफेरोन्युजमा एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको रहेछ । त्यसैले झ्याप्प मन तान्यो, जसको टाईटल थियो : “मेयर ज्यू, हाम्रो छोराछोरी घर लगेर पाल्नुस् ।” त्यहि भिडियो हेरीसकेपछी यो लेख लेख्न सुरु गरेको हुँ । पछिल्लो समय पाल्पामा तानसेन नगरपालिकाले सडक चौडा बनाउने प्रस्ताव चर्चाको बिषय बनेको थियो । यसो हेर्दा भेला सडक चौडा बनाउँदा मासिने घरधनीहरु जम्मा भएर मेयरको हुर्मत काढ्ने छन्को देखिन्थ्यो । मैले अघिपछी विभिन्न सभा, समारोह, भेला, राजनैतिक आमसभामा देखिने र कार्यक्रम सञ्चालकले बोलाउँदा समाजसेवी, निश्वार्थी नेता भनेर बोलाईने व्यक्तिहरु त्यो भेलामा सहभागी थिए ।
जिवनभर कमाएको पैसाले अहिले एउटा घर बनाउन पनी पुग्दैन । त्यो पनी तानसेन बजारको मुख्य क्षेत्रमा भएको घर सडक चौडा बनाउने निहुँमा भत्काउने कुरा चलिरहँदा मेयरलाई यमराज नै मानेर गाली गर्नु स्वाभाविक हो । मेयरले यो विषयमा आवश्यक सल्लाह, बैठक, समिति बनाउने काम गरौंला भनेर भनिरहँदा सहभागीहरु एकोहोरो आफ्नै कुरामा चिच्याउँदै थिए ।
जनताले चुनेर निर्वाचित भएका मेयरलाई सडकमा जति हिँड्ने हो हिँड, तर आफ्नो जग्गा टेक्ने अधिकार नै छैन भनेर धम्की दिँदै थिए । केहीले त जिल्लाको एउटा प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमको नामै तोकेर हेपाईको शैलीमा फलानोले यस विषयमा फुक्याथ्यो भनेर भन्दै थिए । नेपालमा हरेक कुरालाई राजनितिकरण गरिन्छ भन्दा खासै नौलो त हुन्न तर त्यो भेलामा पनी राजनितिकरण गरिएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । यसो हेर्दा मेयरको हुर्मत लिन नेपाली कांग्रेसको अगुवा कार्यकर्ता भेला जस्तो देखिन्थ्यो ।
यो लेखमा यसो लेखिरहँदा लेखकलाई नेकपाको हनुमान, मेयरको सपोर्टर, अनेक …….. अनेक आरोपहरु अवश्य लाग्ने छन् । त्यो विगतका लेखहरुमा पनी लागेकै हो । कुनै निश्चित विषयबस्तुमाथी केही टिप्पणी लेखिसकेपछी त्यस बिषयमा कुनै न कुनै टिप्पणी आउनु स्वाभाविक हो । लेखकले त्यो बुझेको छ । टिप्पणी गर्न पाईन्छ । सधै विकासको कुरा गरेर नथाक्ने कथित युवा नेताहरु सडक चौडा गरिने विषयमा हैन मेयरलाई असफल पार्न भनेर मरिमेटी लागीपरेका छन् । अनेक अनेक उदाहरण पेश गरेर सैद्धान्तिक रुपमा सडक चौडा पारिनुहुन्न भनेर तर्क गरिरहेका छन् ।
विकास भनेको के हो ? शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सडक हो, पर्यटन हो, अनेक अनेक हो । विकासको लागी अहिले स्थानिय तहहरुले आफ्नै आफ्नै अभ्यास गरिरहेका छन् । यसमध्ये तानसेन नगरपालिकाले पनी अहिले विविध विषय संगै सडक विस्तार गर्ने भनेको छ । जसमा तानसेनको होलाङ्दी देखी तानसेन बजार हुँदै बतासे ढुङ्गाखानी सम्म विस्तार गर्ने, बसपार्क देखी मिसन क्षेत्र सम्म सडक विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जुन योजनालाई जिल्लाका अधिकांश नागरिकहरुले सकारात्मक मानेका छन् ।
सरकारी या व्यक्तिगत बजेटमा विदेशका विभिन्न सहरहरुका चौडा सडकमा सेल्फी खिचेर नेपालका नेतालाई गाली गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने महानुभावहरुले एउटा बस या ट्रक हिँड्दा मानिस बाटो मुनी गएर बसलाई साईड दिनुपर्ने बाटो फराकौं भन्दै योजना ल्याउने मेयरलाई सत्तोसराप गर्दै हिँडेका छन् ।
ग्रामिण क्षेत्रका जनता कुन अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ? कस्तो समस्या झेलिरहेका छन् ? नेताहरूलाई त्यसको एक रत्ति पनि हेक्का छैन । सबै नेता ‘आफू भलो त जगत् भलो’ भन्नेमा विश्वास गर्दै मेयरलाई असफल पार्न अन्धाधुन्ध तर्क गरिरहेका छन् । पर्यटन र विकासको नारा लगाएर नथाक्ने नेताहरु एउटा बाटो चौडा बनाउने विषयलाई लिएर लंका जलाउन तयार भईरहेको देख्दा हामी कतातिर गईरहेका छौं भनेर अड्कल काट्न त्यति विज्ञ हुनु जरुरी पर्दैन ।
धेरैजसो विकासका कामको फाइल सबै कि त दराजमा बन्द हुन्छ, कि त टोकरीमा फालिन्छ । जनताको हितका लागी यहाँ विकास योजना ल्याउँदा योजनाबद्ध तरिकाले त्यसलाई तोरमरोड गर्दा हामी कता गईरहेका छौं । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी बन्यो, ठूलठूला भाषण ठोक्यो अनि दिउँसै सपना देखाई दियो सक्यो । जनताको दिर्घकालिन फाईदा के छ ? त्यसले सिंगो जिल्लालाई कस्तो फाईदा पुर्याउँछ केही बहस छैन । दुख भएका नागरिकहरुलाई उचाल्यो, आफ्नो स्वार्थ सिद्धी गर्यो, अरु असफल भएको हेर्यो, रमायो ।
कोही नेताले सार्वजनिक स्थलमा भाषण दिँदा जनताको समस्या के–के छ ? हामी समाधान गर्दिन्छौँ भनेर कहिल्यै सोध्न भ्याएन । त्यसको कोही कसैलाई मतलब छैन । प्रमुख अतिथी बन्यो आयोजक संस्थाको बयान गर्याे सक्यो । दिनमा १० वटा कार्यक्रम राख्दा पनि जान भ्याउँछन् तर, जनताको एउटा गुनासा सुन्न भ्याउँदैन । जनतासँग आँखा जुधाएर कहिल्यै त्यसको भाव बुझ्ने चेष्टा गरिएन । तर जव अर्को पक्षलाई खुईल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको बिषय भेटिन्छ, घुँडोमुण्टो टेकेर पुग्छन् । भएको नभएको लिँडे तर्क गर्छन्, धम्कि दिन्छन्, मनमनै खुसी हुन्छन् ।
तानसेन बजारलाई स्वच्छ बनाउने, सफा बनाउने, फराकिला सडक बनाउने, पर्यटक तान्नको लागी जे गर्नुपर्छ त्यो गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । हो नागरिकहरु मर्कामा परेका होलान्, उनीहरुको पनी कुरा सुन्नुपर्छ । धेरै व्यक्ति सुकुम्बासी नै हुन्छन् भने त्यो विकास किन चाहियो भनेर मेयरले भनेकै छन् । सडक बन्नु भन्दा पहिले बनेका घरहरुलाई उचित मुआब्जा दिने, सडक मिचेर नै घर बनाएका अटेरीहरुलाई कारबाही गर्ने, साँच्चै अप्ठेरो परेकाहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने काम नगरपालिकाले गर्नै पर्छ ।
केन्द्रको सरकारले हेर्न सकेन भनेरै स्थानिय तहको निर्वाचन भएको त हो नी । स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधी आएका त हुन् नी । तानसेनको विकास गर्नको लागी मेयरले योजना ल्याउँदा फलानो पार्टीको योजना भन्दै कम्मर कसेर असफल बनाउन लाग्नेहरु देखी होसियार हुनुपर्छ । राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्न नपाएकाहरुले अहिले गतिलो मुद्धा पाएका छन् नागरिक र जनता उचाल्ने । अव देश स्थिर अवस्थामा छ । अहिले विकास नभएको कहिल्यै पनी हुँदैन । अहिले नबनेका योजनाहरु कहिल्यै पनी बन्दैनन् । अहिले नदेखेका सपनाहरु कहिल्यै पनी देखिदैनन् । केही झिनामसिना अवरोधहरु आउन सक्छन्, अवरोध नआईकन काम सम्पन्न हुँदा त्यती मजा पनी आउँदैन । अहिले ठिक योजना आएको छ । केही व्यक्तिहरुलाई बाहेक अधिकांशलाई फाईदा हुने योजना बनेका छन् । यसमा जनाताको साथ छ ।
अहिले व्यक्तिगत या सामुहिक, सभ्य या असभ्य । जुनसुकै तरिकाले धम्कि आउन सक्छ । असफल पार्नको लागी लाखौं योजना बुनिन सक्छ । अहिले आएको यो समस्यालाई मरिमेटेर समाधान गर्नुभो भने भोलीका सन्ततीले सम्झेलान फलानाले यती राम्रो काम गरेको थियो भनेर । राजतन्त्र सकियो तर पनी एकिकरण गर्ने पृथ्वीनारायण साहलाई सम्झने र उनको गुणगान गाउने लाखौं गणतन्त्रबादीहरु छन् । अहिले स्थानिय तहलाई असफल पार्न सबै ठाउँमा लागेका छन् । ठेकेदारले नक्कली काम प्रमाणीत नहुँदा विरोध गर्छ । घुस्याहा कर्मचारीले कमिसन खान नपाउँदा विरोध गर्छ । प्रतिपक्षले नागरिकका पक्षमा असल काम हुन लागेको बेला जनता भाँड्छ । जनताको खोल ओढेका पार्टीका कार्यकर्ता जनप्रतिनिधीको सकारात्मक कामको विरोध गर्छ र भाँडिन्छ । पत्रकारले अनुकुल भन्दा बाहिरका व्यक्तीको मात्र भावना समेटिएको समाचार लेख्न सक्छ । उही खालका सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्न सक्छ ।
विकास बिरोधीहरुलाई तह लगाउन चर्को कदम चाल्नैपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा असफल बनाउन लागीपरेका हुने भनेर प्रमाणित गर्न अरु केही गर्न पर्दैन । अहिले तानसेनको सडक चौडा पार्ने विषयलाई राजनैतिक रङ दिनेहरुको फेसबुक राती १० बजेको सेरोफेरोमा निरिक्षण गरे पुग्छ । राती रक्सीको नसामा फेसबुकमा पोष्ट गरेर कुण्ठा पोख्छन्, बिहान उठेर होसमा आएपछी पोष्ट डिलिट गर्छन् । त्यसैले केही चिन्ता छैन । विकासका साझेदार जनप्रतिनिधी चुन्ने नागरिकहरुले जनप्रतिनिधी बचाँउन पनी जानेका होलान् ।
त्यसले मेयर ज्यू, विकासको काम गर्न खुट्टा नकपाउँनुस् । केही गर्नुहोला भनेर नै नागरिकले तपाईंलाई धेरै मतले निर्वाचित गरेका हुन् । विकासको काम गर्दा यदी आफ्नो जनप्रतिनिधी माथी कसैले ढुङ्गा हान्ने चेष्ठा गर्छ भने त्यो ढुङ्गा आफ्नो छातीमा थाप्न हजारौं युवा तयार छ ।
मृत्यु जितेर फर्केकाे छु, अझ सार्थक जीवन बाँच्नेछु
बोली दैनिक - 03/24/2021 0